यी युवतीको जि’ब्रोको मूल्य १६ करोड ! – Dailny NpNews
बिहिबार २३ बैशाख २०७८
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख ०७, २०७८ समय: २३:१८:४३
काठमाडौ । क्या’टबरी कम्पनीले एक युवतीको जिब्रोको मू ल्य तोकेको छ । कम्पनीले हायलेई कर्टस नाम गरेकी युवतीको जि’ब्रोको मू ल्य १ मिलियन पा उ ण्ड तो के को हो । लोकप्रिय रहेको क्या’टबरी च क ले ट बनाउने उक्त कम्पनीले युवतीको जिब्रोको मू ल्य त्यसै तो के को भने होइन ।
ती युवतीले चकलेटको स्वा द च’खाउने गर्छिन् । उनलाई चकलेट ए’क्सपर्ट पनि भन्ने गरिन्छ । साथै कम्पनीले उनको बीमा पनि गराएको थियो । उनले च’कलेटको स्वा द पूर्ण रुपमा सही भएको र नभएको ठ’हर गर्छिन् । बीमा कम्पनीले पनि ती युवतीलाई स्वाद लिने इ’न्द्रीयलाई नो क्सा न पु’र्‍याउने कुनै काम नगर्न सु झा व दिएको छ ।
घर तथा गाडी, ब हु मू ल्य वस्तु लगायतका चीजको महँगो मू ल्य तोकिए पनि युवतीको जि ब्रो को यति धेरै मू ल्य तो’किएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा च’र्चाको विषय बनेको छ । उनको जि’ब्रोलाई तो’किएको मू ल्य नेपालीमा लगभग १६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।
प्रिय यात्री, म उडानका क्रममा मनोरंजनका लागि तपाईको हुँ, तपाईंहरु मबाट के गराउन चाहनुहुन्छ ? रोचक
४.	थाइराइडका रोगीले भूलेर पनि नखानुहोस् यी ५ कुरा, नत्र पछुताउनु पर्ला
५.	यस कारण देखिन्छ महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या, यसरी पाउन सकिन्छ छुटकारा
८.	घरमा यो स्थानमा राख्नुहोस कछुवाको मुर्ति, घरमा बर्षने छ धन, सुख र शान्ति
आज २३ वैशाख २०७८, बिहिवार : आजको राशिफल